गुगलले गुगल एनालिटिक्स स्टारलाई मार्यो
मङ्गलबार, अप्रिल 6, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। म्याट चन्डलर
तपाईको पेटमा डुब्ने भावना वास्तवमा तपाईको ब्राउजरबाट आएको हुन सक्छ। अब नहेर्नुहोस्, तर गुगलले ब्राउजर प्लगइन रिलिज गर्ने योजना बनायो जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्र्याकबाट अप्ट आउट गर्न अनुमति दिनेछ… Google विश्लेषण.
गुगल, अग्रणी खोज प्रदायक र लोकप्रिय गुगल एनालिटिक्स वेब ट्राफिकको पछाडि अश्वशक्ति विश्लेषण उपकरण, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आफ्नै उपकरणद्वारा ट्र्याक हुनबाट बच्न अनुमति दिन जाँदैछ.
यसले वेबमास्टरहरू र वेब मार्केटरहरूको लागि वेबसाइट ट्राफिक ट्र्याक गर्न गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्ने धेरै प्रश्न र सम्भावित प्रभावहरू ल्याउँदछ, मुख्य रूपमा कसरी प्लगइनको प्रयोगले साइट ट्राफिक डाटाको संग्रहलाई असर गर्दछ। यो अर्को सम्भावित बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न जान्छ: गुगलले त्यसो किन गर्दछ जब गुगल एनालिटिक्स पहिले स्थान मा व्यक्तिगत डाटा स collect्कलन गर्दैन?
पहिलो चीजहरू अन्तिम, यो के विचार गर्न सकिन्छमा निर्भर गर्दछ व्यक्तिगत डाटा के तपाईंको ISP जानकारी र भौगोलिक स्थान व्यक्तिगतको रूपमा गणना गर्दछ? गुगल एनालिटिक्सले व्यक्तिगत आईपी ठेगानाहरू स .्कलन गर्दैन, यसको मतलब ट्र्याक गरिएको सबै जानकारी पूर्ण बेनामी हुन्छ।
के यो Google को श्रेणी मा राख्छ कुल कपटीहरू किन ती प्रयोगकर्ताहरूको खोजी ईतिहासको एक अनिश्चित रेकर्ड राख्न सक्छन्? हुनसक्छ खोज ईतिहासले गुगललाई ती अद्भुत निजीकृत खोजी परिणामहरू डेलिभर गर्न अनुमति दिन्छ, र तिनीहरूको सुविधाको साथ यस सुविधाको अप्ट आउट गर्न सजिलो भएको छ गोपनीयता केन्द्र, तिनीहरू वास्तवमै तिनीहरूको सम्भावना विज्ञापन गर्न बाहिर जान्छन्। यो पनि उल्लेख छ कि एक गोपनीयता समूह फेडरल ट्रेड कमिशन को अनुरोध गरेको छ गुगल बजमा अनुसन्धान खोल्नुहोस्, त्यसैले गुगल गोपनीयता फ्रन्ट मा बस एक बिट stinging हुन सक्छ।
हल्ला भएको छ भारी र उच्च प्रोफाइल, तर मेरो पहिलो प्रतिक्रिया थियो त्यसो भए? कति व्यक्तिहरू सजग छन् पनि तिनीहरूसँग गुगल प्रोफाइल छ, एक्लै छोड्नुहोस् कि उनीहरू यो प्रोफाइल सम्पादन गर्न सक्छन् र उनीहरूको गोपनीयता सेटिंग्स र विज्ञापन प्राथमिकताहरू समायोजित गर्न सक्दछन्? म कुनै चाँडै कुनै अनुभवजन्य डेटा फेला पार्न सक्षम भएन, तर वेब प्रयोगकर्ताहरूको कुल प्रतिशत कुन छ जसले फायरफक्सको लागि AdBlock Plus प्लगइन प्रयोग गर्दछ? यो मानक विचलन बाहिर राख्नको लागि यो पर्याप्त ठूलो छैन।
मेरो आधारभूत विन्दु भनेको वेबमास्टरहरू र बजारका लागि यो चालमा अधिक सदस्यता बेच्न सक्छ सर्वव्यापी र वेबट्रेंड्स पर्दा पछाडि ती हामी सबै सकेसम्म बढी डाटा पहुँच गर्न चाहन्छौं। तर त्यो चाल घुँडा टेक्ने समस्यामा हुन सक्छ जुन पनी अहिले सम्म छैन doesn't र कहिले पनि अवस्थित छैन।
टैग: विश्लेषणftcGoogle विश्लेषणसर्वव्यापीबाहिरिनुप्रोफाइलआज सोशल मिडियाउद्यमप्याडवेबट्रेंडहरू
तपाईंको साँचो दर्शक को हो?
को जनसांख्यिकीय Martech Zone
अप्रिल 6, 2010 मा 9: 46 एएम
गुगल एनालिटिक्स एक अनिश्चित स्थिति मा छ। एकातिर, तिनीहरू एकाधिकार हुन् - बजारमा मात्र एकीकृत Adsense र एनालिटिक्स समाधान प्रस्ताव गर्दै। तिनीहरू कुनै पनि विश्लेषण प्रदायकसँग एकीकृत गर्न बाध्य हुनुपर्छ। अर्को तर्फ, तिनीहरूले केही उत्कृष्ट एकीकरणहरू गर्न सक्दैनन् (जस्तै। वेबट्रेन्ड्सद्वारा फेसबुक एनालिटिक्स) किनभने तिनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्। यो एक मात्र सादा गूंगा देखिन्छ, यद्यपि।
अप्रिल 6, 2010 मा 2: 06 PM
म आशा गर्छु कि Webtrends ले यो तपाइँको काम हो भनेर सोच्दछ त्यसैले तपाइँ एक हेलुवा बोनस पाउनुहुन्छ।
हो, हानापिनमा प्याट ईस्ट हालसालै यस बारे ट्वीट गर्दै थिए। पहिले वेभ, त्यसपछि बज, त्यसपछि क्याफिनको ब्याकअप, अब यो?
यो जस्तो छ कि उनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई तोडफोड गरेर एकाधिकार प्राप्त गर्नबाट जोगाउन कोशिस गरिरहेका छन् जबसम्म अरूले समात्दैनन्।
अप्रिल 6, 2010 मा 4: 50 PM
खैर यो राम्रो छैन, जबसम्म उनीहरूसँग ब्लकि code कोड प्रयोग गरी मानिसहरूलाई ट्र्याक गर्ने तरिका हुँदैन। 🙂
अप्रिल 6, 2010 मा 5: 10 PM
गोपनीयताको हाम्रो अमेरिकी दृष्टिकोणमा यसले कुनै अर्थ राख्दैन, तर गुगल एनालिटिक्स युरोपेली देशहरूमा राम्रो स्थितिमा हुनको लागि (यस प्रकारको अप्ट-आउटको लागि विश्लेषण विक्रेताहरूलाई सोध्दै आएको छ), गुगल एक नेता हो। थप रूपमा, यो परिवर्तनले गुगल एनालिटिक्सलाई सरकारी साइटहरूका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ (यसले गोपनीयताको लागि अमेरिकी सरकारको दिशानिर्देशहरू पालना गर्दछ)।
यसलाई फरक तरिकाले नेतृत्वको रूपमा सोच्नुहोस्। यसले मार्केटरहरूका लागि प्रभाव पार्छ, तर मलाई लाग्छ कि समयको साथमा, सरकारहरूको नियमहरूले यस अप्ट-आउट मेकानिजमसँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव नगर्ने विश्लेषक विक्रेताहरूलाई समात्नेछ।
अप्रिल 7, 2010 मा 2: 10 PM
रोचक बिन्दु। मैले युरोपेली बजारको बारेमा सोचेको थिइनँ। अन्तरदृष्टि को लागी धन्यवाद।